SUPPORTMM October 31, 2021
I won’t bearockstar, I will bealegend.
ကျွန်တော်တို့နှစ်သက်သဘောကျတဲ့ ဂီတအနုပညာရှင်တွေကို ပျမ်းမျှ နှစ်မျိုးနှစ်စားခွဲလို့ရပါလိမ့်မယ်။ မွေးရာပါ ပါရမီထူးကဲပြည့်စုံတဲ့သူတွေရယ် နဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှု ကောင်းလွန်းသူတွေဆိုပြီးတော့ပေါ့ ။ အဲဒီ နှစ်ခုလုံးအချိုးကျပေါင်းစပ်နိုင်သူတွေက ကမ္ဘာကျော် ဂီတအနုပညာရှင်တွေဖြစ်လာတာပါပဲ ။ Freddie Mercury ကတော့ခြွင်းချက်ပါ ။ ဘာလိုလဲဆိုတော့ သူကတော့ အဲ နှစ်ခုလုံးကိုအချိုးကျပေါင်းစပ်နိုင်ရုံမျှမကဘဲ နှစ်ခုလုံးကိုသာမန်ထက်ကို ပိုလွန်းမက ပိုနေလို့ပါပဲ ။
Queen ဆိုတဲ့နာမည်ကြားလိုက်ရုံနဲ့ ကျွန်တော်တို့အသိဥာဏ်ထဲမှာ ဘာအကောင်းဆုံးလဲလို ပြန်ရွေးရခက်လောက်အောင်ကို အကောင်းတကာ့အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ သီချင်းတွေအစီအရီပါပဲ ။ Bohemian Rhapsody , We are the Champions, Love of My Life , Somebody to love စသဖြင့် စသဖြင့်ပြောမကုန်နိုင်အောင်ကို အခမ်းနားဆုံး ဂီတအနုပညာတွေဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သူပါ ။
ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တစ်ခုလောက်ကြားဖြတ်ပြောပါစေ။ ကျွန်တော်ရေးတဲ့ ဂီတအနုပညာရှင်တွေအကြောင်းတွေဟာ သူတို့ရဲ့ အတ္ထုပ္ပတ္တိတွေမဟုတ်ပါဘူး ။ သမိုင်းမှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေမဟုတ်ပါဘူး ။ အရက်ဘားမှာ coffee shop မှာ မိတ်ဆွေတစ်ဦးက သူ့မိတ်ဆွေတစ်ဦးကို သူသိထားတာတချို့ပြန် share တဲ့ သဘောတစ်ကိုယ်စာပုဂ္ဂလိက အမြင်တချို့ကို မိတ်ဆွေအချင်းချင်း စားမြုံပြန်တဲ့သဘောပါ ။
ဒါပေမယ့်အဲဒီလိုပေါ့ပေါ့ပါးပါးပြောမယ်ဆိုရင်တောင် Freddie Mercury နဲ့ Queen ရဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာ ဘုန်းတော်ဘွဲ့ဖြစ်သွားလောက်သည်အထိကို ခမ်းနားပြည့်စုံလွန်းတဲ့ အနုပညာရှင်တွေပါ။အရှိကိုအရှိအတိုင်းထိုင်ပြောနေရင်တောင် အလွန်အကျွံချီးမြှောက်မှုတွေလို့ထင်ရလောက်သည်အထိကို အနုပညာမှော် အနုပညာစျာန်တွေ ထုံမွှန်းပြည့်စုံနေတဲ့ အနုပညာလက်ရာတွေဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ် ။
Freddie Mercury ဟာ ကလေးပေါက်စလေးကတည်းက Piano ခလုတ်တွေပေါ်ကို လက်စတင်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ် ။ Freddie ရဲ့ Queen ဟာ Freddie နဲ့စတင်ခဲ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူး ။ Queen ရဲ့ Drummer နဲ့ Lead Guitarist တွေဖြစ်တဲ့ Roger Taylor နဲ့ Brian May တိုရဲ့ Smile ဆိုတဲ့ Band ကနေစတင်ခဲ့တယ်ဆိုရပါမယ် ။ Freddie Mercury ဟာ အဆိုပါ Smile ဆိုတဲ့ band ရဲ့ပရိသတ်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပါသတဲ့ ။ Smile ရဲ့ ပင်တိုင်အဆိုတော်ထွက်သွားချိန်မှာတော့ Freddie Mercury ဟာ Smile ရဲ့ ပင်တိုင်အဆိုတော်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် ။ Freddie ရဲ့ရှေ့ကိုအနည်းငယ်ထွက်နေတဲ့ရှေ့သွားတွေကြောင့် အသံပိုင်းဆိုင်ရာမှာ ပြဿနာရှိနိုင်တယ်လိုအထင်ခံခဲ့ရဖူးပါတယ် ။ သူရဲ့ အိမ်ဖြစ်လာမယ့် Smile ( Queen ) ဆီကနေပြီးတောင်မှပါ ။ လူတွေကအားနည်းချက်လိုထင်တဲ့အရာကို အားသာချက်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့ Freddie ပါပဲ ။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ band နာမည်ဟာလည်း Queen ဆိုပြီး ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် ။
Queen နဲ့ Freddie ရဲ့ ဆုတွေ အောင်မြင်မှူတွေ စာရင်းဇယားတွေ အကြောင်းမရေးပြတော့ပါဘူး ။ အပေါ်မှာပြောခဲ့သလို တန်းစီချရေးရင်တောင် မနည်းမနောရှည်လျားတဲ့ ဘုန်းတော်ဘွဲ့ကြီးဖြစ်သွားနိုင်လို့ပါပဲ ။
ဘာသာရေးရှေးရိုးအစဉ်လာအစွဲကြီးတဲ့ မိဘမျိုးရိုးမိသားစု နဲ့ Mega Rockstar တစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝနေထိုင်မှုတွေကြား ၊ လူမှုရေး အိမ်ထောင်ရေး အခက်အခဲတွေကြား ၊ သူ့ဘဝရဲ့ နောက်ဆုံးနှစ်တွေမှာဆို ကျန်းမာရေး အခက်အခဲတွေကြားကနေ Freddie Mercury ဟာကျွန်တော်တို့အတွက် ယနေ့တိုင် ဟောင်းနွမ်းရိုးအီမသွားမယ့် အနုပညာတွေ ထားခဲ့ပေးနိုင်သူဖြစ်ပါတယ် ။
ကျွန်တော်ထပ်ပြောပါရစေ ။ Freddie နဲ့ Queen ရဲ့ ခမ်းနားမှူတွေဟာ ခုကျွန်တော်ရေးသလောက်စာပိုဒ်အနည်းငယ်နဲ့ လုံးဝ ပြည့်စုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး ။ သာမန်အစဆွဲထုတ်ရုံလောက်ပဲကျွန်တော်ရေးပြတာမို သူ့အကြောင်းစာအုပ်တွေ လည်းမနည်းမနောရေးသားခဲ့ကြတဲ့အတွက်ရှာပြီးဖတ်ရှူနိုင်သလို ၂၀၁၈ တုန်းက ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Bohemian Rhapsody ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုလည်း ကြည့်ကြည့်ဖိုညွှန်းပါရစေ။
အနုပညာကိုဘယ်လိုဘောင်ခတ်မှူမျိုးကိုမှမနှစ်သက်တဲ့ ၊ ကြောင်လေးတွေကိုချစ်တတ်တဲ့ ကျွန်တော်တိုရဲ့ တော်ဝင်ဂီတမှော်ဝင်သည်ကြီး Freddie Mercury ဟာ ကျွန်တော်တိုကို စွန့်ခွါသွားတာဆယ်စုနှစ် နှစ်ခုကျော်လောက်တောင်ရှိခဲ့ပေမယ့် သူချန်ထားခဲ့တဲ့ အနုအပညာတွေကတော့ ကျွန်တော်တိုနဲ့ နောက်ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာတည်ရှိနေဦးမှာကတော့ အသေအချာပါပဲ ။
Nyopyar January 8, 2022 at 7:41 AM
I won't beachancellor,
I will beaclicker.
Sofi February 26, 2022 at 2:55 PM
Stay healthy and keep clicking.